प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण : के बोकेर जाँदैछन् र के बोकेर फर्केलान् ? - Himalayan Kangaroo
प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमण : के बोकेर जाँदैछन् र के बोकेर फर्केलान् ?
Posted by Himalayan Kangaroo | २९ भाद्र २०७३, बुधबार १५:१० |
हुन त सम्बन्ध सुधारका लागि हो प्रधानमन्त्रीको शब्दमा यसपटककको भारत भ्रमण । यद्धपि नेपालका कुनै पनि सरकार प्रमुखको भारतको औपचारिक भ्रमण तीर्थ भर्न गए जस्तो भने भएको छैन । लेनादेनाको केही विषय गाँसिएको हुन्छन नै । चौतर्फी आलोचना र सचेत रहन दिइएको सुझावले पनि होला , यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एजेन्डाका पुरानै भारी बोकेर दिल्ली निस्कने तयारीमा देखिनु भएको छ । त्यस्मा पनि केही सानातिना मानिएका विषयहरु पनि उठान हुने देखिएको छ ।
बिहीबार देखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ४ दिने भारत भ्रमण हुँदै छ । सबैको आँखा उहाँको भ्रमणका समयमा हुने भारतसँगको सम्झौता र सहकार्यमाथि रहेको छ । नेपालमा विद्यमान केहि सम्झौता जसलाई पुनरावोलोकन गर्न जरुरी रहेको भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पुराना एजेन्डा सहित हुन लागेको छ । दिल्ली यात्रामा जान लागेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई यतिबेला ठूलो जिम्मेवारी रहेको छ , त्यो हो जनताको विश्वास जित्नु । प्रधानमन्त्रीकोरुपमा ९ वर्ष पछि पुनः हुन लागेको उहाँको यो यात्रामा उनले उठाउने विषय र भारतको विषय के होला र कस्ता विषयमा सम्झौता होलान् भन्ने सबैको प्रश्न छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा पुरानै एजेन्डाले महत्व पाउने देखिएको छ । बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा आफनो भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको एजेण्डामा तराई मधेसको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी मार्गलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ । पहिला नै भएको सहमति अनुसार हुलाकी मार्गको पहिलो खण्ड तत्काल थालनी गर्न भारतलाई आग्रह गरिने छ । यस्तै विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)को कार्यान्वयन र पञ्चेश्वरको डीपीआर लगायतको काम अघि बढाउनेबारे तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगबारे छलफल, वीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोष्ट निर्माणलाई छिट्टै सम्पन्न गर्ने र भैरहवा, बिराटनगर र नेपालगञ्जमा पनि चेकपोष्ट स्थापनाबारे छलफल हुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।
एक समय माओवादीले मुख्य मुद्दा बनाउदै आएको सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको विषयमा अहिले आएर माओवादी मौन बस्नु नै हितकर ठाने झै देखिएको छ । यस्तै दुई देशको सीमाका विषय, भारतले नियम विपरित बनाएको सप्तरीको तिलाठीको बाँध, महाकाली र गण्डकी जस्ता सन्धिहरुको पुनरावलोकन गराउने जस्ता विषय समावेश नभएको देख्दा भ्रमण वास्तवमा सम्बन्ध सुधारका लागि नै हुने पक्का भएको छ । यद्धपि अपवाद वाहेक नेपालका प्राय सरकार प्रमुखहरु दिल्ली भ्रमणबाट फर्कदा जस भन्दा अपजसको भारी नै बढी बोक्दै आएका छन् । यो दोषबाट दाहाल मुक्त हुन सक्ने छन या छैनन् त्यो उनैमा निर्भर रहने छ ।
Previousविद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त
Nextराष्ट्रिय खेलाडीलाई पेन्सन दिने सरकारको तयारी
‘म यसकारण देश छोडेर अष्ट्रेलिया आएँ आमा’ !
१७ जेष्ठ २०७३, सोमबार ०६:४९